၂၀၀၇ နှစ်ကတော့ လက်တပြပြ ဖြစ်နေပြီ။ သက္ကရာဇ် ၂၀၀၈ ကလည်း ရောက်လာဖို့ အရှိန် အဟုန်နဲ့ စိုင်းပြင်းနေလေရဲ့။ ၂၀၀၇ ကိုကတော့ အလုပ်ရှုပ်ခြင်းပေါင်း မြောက်မြားစွာနဲ့ နှုတ်ဆက်ရမဲ့ သဘောရှိနေပါတယ်။ လက်ရှိ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ Project က လက်စသတ်ခါနီးဆိုတော့ အလုပ်က အခုမှ ကတ်ရှုပ်နေပါတယ်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ကိုယ့် ဘလော့ကို ကိုယ် ၀င်ကြည့်လိုက်တိုင်း လာလည်သွားကြတဲ့ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေကို အားနာ မိပါတယ်။ သူများတွေ ပို့စ် အသစ်တွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု တင်နေကြစဉ်မှာ မောင်လူအေးက တိုင်ပတ်နေတာနဲ့ ဘာမှ မရေးအား ရေးမယ် စိတ်ကူးလိုက်... စာတစ်ကြောင်း နှစ်ကြောင်းရေးလိုက်... အလုပ်ရှုပ်လိုက်နဲ့ စာတွေ လက်စမသတ် ဖြစ်သေးတာတွေက များနေတယ်။
လောလောဆယ်မှာ သက္ကရာဇ် ၂၀၀၇ ကတော့ မကြာခင် သုံးလေးရက်မှာပဲ နှုတ်ဆက်တော့မှာပါ။ ၂၀၀၇မှာ ကမ္ဘာမှာ ဘာတွေ ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်ခဲ့သလဲ။ ကျွန်တော်တို့ ဘ၀တွေရော ပြောင်းလဲ ခဲ့သလဲ။ သေချာတာတော့ တစ်ရက်ထက် တစ်ရက် အသက်ကြီးလာကြတာနဲ့ အမျှ ဘ၀ဆိုတာထဲ ချည်းနင်း ၀င်ရောက်လာနေတာနဲ့ အမျှ အသက်ရှုရတာက အစ ငယ်ငယ်ကနဲ့ မတူတော့တာ အမှန်ပဲ။ တိုးတက်မှုတွေ အသီးသီး အသက ရရှိခဲ့ကြတာတွေ ရှိမယ်။ မှန်းထားသလောက် အောင်မြင်မှု မရခဲ့ကြတာတွေ ရှိမယ်။ ၂၄ နာရီချင်းတူတူရကြတဲ့ (သန်းခြောက်ထောင်ကျော်)လူသားတွေ အချင်းချင်းမှာ တချို့ကအောင်မြင်ပြီး တချို့က မှန်းသလောက် မဖြစ်ခဲ့တာာတွေရှိကြမယ်။ ကြိုးစားသလောက် အောင်မြင်မှုရကြတာတွေ ရှိသလို မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက် မကိုက်ခဲ့ကြတာတွေ လည်းရှိမယ်။ ကြိုးစားသလောက် အောင်မြင်ခဲ့ကြသူတွေ အတွက် ဆက်ကြိုးစားဖို့ ခွန်အားသစ်တွေ မွေးမြူဖို့ လို အပ်သလို၊ အကြိမ်ကြိမ် ကြိုးစားတာတောင် အောင်မြင်မှု မရသူတွေ အတွက်တော့လည်း နည်းနာ နိသယ အသစ်တွေ ရှာဖွေဖို့ လိုလေမလား သုံးသပ်ကြရမဲ့ ဆုံမှတ်တစ်ခုလို့ ဆိုရင်လည်း မှားအံ့ မထင်ပါဘူး။ ဆိုတော့...
၂၀၀၇ သည် ကျွန်တော်တို့ ထင် သလောက် အောင်မြင်ခဲ့ရဲ့လား
အောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုရင် ဘယ် အချက်တွေ မှာအားသာလို့ ဘယ်အချက်တွေမှာ ကျွန်တော်တို့ ထပ်အားဖြည့်သင့်သလဲ
တကယ်လို့ တချို့ အချက်တွေ မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ရော.. ဘယ် အချက်တွေ အားနည်းလို့ ဘယ် နည်းစနစ်တွေမှာ အားနည်းချက်တွရှိခဲ့သလဲ
စီစဉ်ထားတဲ့ အချက်တွေ အောင်မြင်ဖို့ ဘာတွေ အားကူ ထပ်ဖြည့်စရာတွေ လိုပါသလဲ
၂၀၀၈ ရဲ့ ဒီဇင်ဘာ ဒီရက်မျိုးမှာ "ငါတော့ဖြင့် ဒါတွေ အောင်မြင်ပြီးမြောက်ခဲ့ပြီ" လို့ တွေးပျော်နိုင်ဖို့ ဘာတွေ ကြိုတင်စီစဉ်ရမလဲ...
တွေးခေါ်စရာလေး တစ်ခုအနေနဲ့ ဝေမျှခြင်းပါ။ ကုန်သွားတာကို တမ်းတ ၀မ်းနည်းနေစရာ မဟုတ်ပေမဲ့ နောက်ထပ်ရောက်လာမဲ့ နှစ်သစ်အတွက် မိမိ ဖြတ်ကျော် အောင်မြင်စရာ လေးတွေ စီစဉ် ပြင်ဆင်ထားခြင်းအားဖြင့် အားသစ် အင်သစ် စိတ်သစ်လူသစ်နဲ့ HAPPY NEW YEAR လို့ ဟစ်အော်ရင်း နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုမယ်ဆိုရင်.. ပိုပြီး အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝမယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်ဗျာ...
့ဆိမ်းတူယူပါ......စိတ်ညစ်စရာ ဆိုတာလည်း အချိန်တခု ပေါ်မှာပဲပြောင်းလဲ သွားတာပဲ။ နှစ်သစ်ကို စိတ်သစ် နဲ့သွားမယ်နော်...... :P
မှန်လိုက်တာ။ တကယ်ပဲ အစီအစဉ်ချပြီးမှနှစ်သစ်ကိုကြိုကြရအောင်နော်။
my blog post Www.Pengchat.com
my homepage - http://www.astromindsclub.com/
My web-site ... www.shamolsaya.com
Here is my blog post :: http://mascocco.net/blog/view/3312/summer-travel-to-spain-on-a-budget
Also visit my site viralsocialpop.com
previous to and you are simply extremely great. I actually like what you have received right here,
really like what you are stating and the best way through which you say it. You make
it enjoyable and you still care for to keep it smart. I can not wait to read much more from you. This is actually a
Here is my site blackslink.com
Also visit my website: www.varsitymedia.co.ke
just bought me lunch since I found it for him smile Thus let me
Stop by my blog post - www.teamgeorgiawrestling.com
Feel free to surf to my site - szakibazis.com
my web page; chatalone.com
my site :: http://www.swatti.com